Ndeapi akanakisa ekutenga pamhepo nzvimbo muIndia? | Absolut Kufamba
Ndeapi akanakisa ekutenga pamhepo nzvimbo muIndia?
Ino nguva yatinozoziva kuti ndeapi akanakisa indian online zvitoro zvekutengesa. Ngatitangei nekutaura flipkart.com, portal inotibvumidza kutenga mabhuku, nhare mbozha, malaptop, zvishongedzo zvemakomputa, makamera, mafirimu, mimhanzi, materevhizheni, mafiriji, MP3 players, nezvimwe. Flipkart.com inoonekwa seyakakura e-commerce mumiriri murudzi.
Isu tinofanirwa zvakare kuratidza nyaya ye ebay.in, iyo Indian vhezheni yeinonyanya kufarirwa kutenga nekutengesa chitoro. Ebay inopa sezvo iwe uchinyatso kuziva zvigadzirwa zvitsva uye zvinoshandiswa mune dzakasiyana siyana zvikamu.
Chinzvimbo chechitatu ndecheTradus.in, chiteshi cheIbibo, patinogona kutenga mabhuku, mbatya, nhare, makamera, wachi, zvishandiso, pakati pevamwe.
shopclues.com inzvimbo yatinogona kutenga makamera, zvishandiso zvemakomputa, nharembozha, zvipo, zvishongo, zvizoro, matoyi, mbatya nemabhuku.
Myntra.com inzvimbo yekutengesa uko kwatinogona kutenga zvigadzirwa zvemafashoni senge t-shirts, shangu, wachi, pakati pevamwe.
Nzvimbo yechitanhatu ndeye KumbaShop18.com, portal uko kwatinozowana zvekushandisa mukicheni, makamera, nharembozha, malaptop, zvipo, zvipfeko, nezvimwe
Yebhi.com Inofungidzirwa seimwe yenzvimbo huru dzekutenga maererano nefashoni. Pano isu tine mukana wekutenga shangu, zvipfeko, zvishongo, mabhegi, nezvimwe.
Vapeworld.com inzvimbo yatinogona kuwana kupihwa kwezuva nezuva kwemaresitorendi, maspas, nzendo, uye nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana Iwe uchave uchifarira kuziva kuti kutumira kuri mahara.
Nzvimbo yepfumbamwe ndeye pepperfry.com, portal yekutengesa zvipfeko zvevarume nevakadzi, zvishongedzo zvekushongedza imba, zvishongo, pefiyumu, zvizoro, fenicha, mabhegi, nezvimwe.
Mamwe ruzivo: Kutenga muLisbon
mabviro: India Mahara Zvinhu
Photo: Vadivelu Comedy Technology Brunch
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ndeapi akanakisa ekutenga pamhepo nzvimbo muIndia?
Alejandro Lopez Palma akadaro
Izvo zvakavimbika kutenga laptop kubva pafiripi? Ndiri kufunga nezve kutenga modhi isiri kutengeswa kuSpain.
Pindura kuna Alejandro López Palma
lalit gulwani akadaro
Flipcart, Snapdeal, Amazon, ndiwo masosi matatu epamusoro ekutenga online muIndia uye akavimbika kwazvo.
Pindura kuna lalit gulwani
angie paola akadaro
Manheru akanaka, ndinotarisira kuti munogona kundibatsira nemamiriro angu aya, zvinoitika ndezvekuti ndichaenda kunheyo iri kutanga kuIndia, uye kuve ndiripo ndichatenga izvo zvinodiwa kubatsira vamwe vanhu, asi izvo ini ndichatenga handisi kuzochiwana munyika muno uye ndichafanirwa kutenga online, mubvunzo wangu ndewokuti, kuIndia kunze kwekadhi rechikwereti pane imwe nzira yekutenga paInternet?
Manheru akanaka, ndinotarisira kuti vanogona kundibatsira nemamiriro angu ezvinhu, zvinoitika ndezvekuti ndichaenda kunheyo iyo ichangotanga muindia, uye ndiripo ndichatenga izvo zvinodiwa kubatsira vamwe vanhu, asi izvo iwe kutenga hakuiwani munyika ino uye ndichafanirwa kutenga online, mubvunzo wangu ndewokuti, pane imwe nzira yekutenga paInternet muIndia kunze kwekadhi rechikwereti?
Pindura kuna angie paola
Nhoroondo Vatungamiriri veIndia
Zvigadzirwa zveIndia zvinotumirwa zvakanyanya